Overland 4x4 Tourism Expedition: Beaume Trans-Africa yakabudirira kushanya kuLesotho
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Lesotho Breaking News » Overland 4 × 4 Tourism Expedition: Beaume Trans-Africa yakabudirira kushanya kuLesotho
Lesotho Breaking News • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Overland 4 × 4 Tourism Expedition: Beaume Trans-Africa yakabudirira kushanya kuLesotho
The Overland 4 × 4 Tourism Expedition - boka revatsvakurudzi makumi maviri nemasere (vanozivikanwa seBeaume Africa Group) vakapinda muHumambo hweLesotho musi waApril 28, 18 kuburikidza neSani Pass muEastern chikamu chenyika, pamwe neDrankensberg Mountains.
Iyo nzira inokwira Sani Pass mugwagwa wakadzika unovharwa nechando nechando munguva yechando, uye uri 9 km pakureba. Vakagara paSani Mountain Lodge, paSani Top. Sani Top inzvimbo yeWorld Heritage inomira pamamita 2,874 pamusoro pegungwa, uye inozvirumbidza "Iyo Yepamusoro Pub muAfrica." Vakabva vapfuurira mukati megungwa nemigwagwa yemakomo yeLesotho inokatyamadza. Vakasvika kuSemonkong (nzvimbo yeutsi), uko kwavakagara kuSemonkong Lodge kwemazuva maviri. Vari ikoko, vakashanyira Maletsunyane Fall, mapopoma ane urefu hwemamita 192 paRwizi rweMaletsunyane, achidonha kubva pamupendero weTriassic-Jurassic basalt, uye ndokudyidzana nenharaunda dzenzvimbo, vachisangana nemararamire echinyakare evanhu vechiBasotho. Vakasiya Lesotho neChina, Kubvumbi 13, 2017, kuburikidza neQacha's nek Gate, vachipinda muSouth Africa, kuti vabatane neGarden Route, vachienda kuCape Town.
Lesotho inozvirumbidza pamakomo ayo marefu - akakwirira kwazvo muSouth Africa, aine maonero anoshamisa enzvimbo yakachena inoratidzirwa nenzizi dzinoyerera, mapopoma anodonha, uye hova dzakachena. Kupfuurirazve, nekuda kwemamiriro ekunze akakwirira-mamiriro ekunze, inosangana nemamiriro ekunze anotonhora uye sinou, ingangoita 9 kubva pamwedzi gumi nemiviri yegore. Ino inzvimbo yakanaka yekushanya uye kushanya kwemitambo; nzvimbo yemufambi anonzwisisa uye vafambi vechokwadi, uye kune vanhu vakaneta nemazororo ekutengesa uye vari kutsvaga "kusimuka" zviitiko zvezviitiko.
Chiitiko chakarongwa pamwe chete ne4 × 4 World Explorer Sdn Bhd (Malaysia) uye African Expedition (South Africa), uye inoumbwa nevanoongorora kubva kunyika dzakasiyana, uye inoita mazuva makumi matanhatu ekutyaira kubva kuDurban, South Africa, kuenda kuLesotho, kuCape Town, uyezve kuNamibia, Botswana, Zambia, Tanzania, uye nzvimbo yekupedzisira yeMombasa, Kenya. Chikwata chine ruzivo ichi chakafamba kuburikidza neLesotho, chakatora chikamu, chakaronga, uye chakatungamira mafambiro akaomesesa munzvimbo dzakasiyana siyana dzepasi. Chinangwa cherwendo urwu ndechekusimudzira runyararo, chishuwo, hushamwari, pamwe nekubatana pakati pevanhu veMalaysia neLesotho. Panguva yekushanya kwavo kuLesotho, vakashanyira nzvimbo zhinji dzekushanya nenzvimbo.